Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Kasoo Cusboonaaday Gobolka Axmaarada oo Khasaare Dhaliyay.
Dagaallo Kasoo Cusboonaaday Gobolka Axmaarada oo Khasaare Dhaliyay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay sare ukaceen dagaalada lagaga soo horjeedo gumaysiga ee ladoonayo in lagu xoreeyo dhulka lagumaysto ee Xabashida.
Sida xogta aan kuhelayno 4 dagaal oo waawayn ayaa xalay iyo shalay kadhacay deegaanada Axmaarada kuwaas oo sida lasheegayo lagu naafeeyay ciidanka doolka iyo dulmiga kujooga dhulka Axmaarada ee Commond Post ga looyaqaano.
Dagaaladan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa lasheegayaa in ay kadhaceen Dagmooyinka Bosana, Qanje, Bubiyi iyo Audite kuwaas oo dhamaan tood katirsan Gobolka Axmaarada, waxaana lasoo warinayaa khasaare aad uculus oo soo gaadhay ciidanka wayaanaha iyo kuwa kabaqaadka u ah ee deegaanka udhashay.
War qoraal ah oo kasoo baxay Jabhada Amara Democratic Movement Force (ADMF) ayaa lagu sheegay in ciidanka Jabhadu ay dileen gudoomiyihii Dagmada Qonje Tegabu Damise iyo gudoomiyihii Dagmada Bibiyi Tilahun Tafara iyo gudoomiye kuxigeenkii Dagmada Audite Darasa Kindu, kuwaas oo sida ay jabhadu sheegtay lagu laayay howl gal qorshaysan oo hogaanka ciidanka ee jabhadu ay dajiyeen.
Sidoo kale Jabhada ayaa sheegtay in ay howl galadan cusub kudileen ciidan aad ubadan oo kuwa Commond Post ga looyaqaano ah, kuwaas oo sida ay jabhadu sheegtay dhibaatooyin kala duwan kuhaya dadka shacabka ah.
Jabhada ADMF ayaa sidoo kale sheegtay in ay sare uqaadi doonaan dagaalada ay kuxoraynayaan deegaanka Axmaarada, kaas oo markii horaba ay kasocdeen dagaalo ay iskaga soo horjeedaan ciidanka wayaanaha iyo kuwa Jabhada Ginbot 7.